mai | 2020 | InfoKmada
Fanarenana ny firenena vokatry ny Covid-19 : drafitra 02 lehibe no hapetraka
InfoKmada - 29 mai 2020 0
Drafitra 2 lehibe no hapetraky ny fitondram-panjakana hanarenana ny firenena amin’izao krizy vokatry ny valan’aretina Cronavirus izao. Ny « plan multisectoriel d’urgence » sy ny « Plan multisectoriel de relance ». Ho foana afaka volana vitsy ihany koa ny « passif » aloan’ny fanjakana amin’ireo mpandraharaha Solika.
TOAMASINA : nitokona ireo mpianatry ny oniversite
Nidina an-dalambe ireo mpianatra izay tavela eny anivon’ny Cite Universitaire tao Barikadimy Toamasina tamin’ity androany ity. Ny fitakiana ny vatsim-pianaran’izy ireo 5 volana sy fangatahan’izy ireo fanampiana vatsy amin’ny fanjakana no anton’ny fihetsiketsehana izay, naharitra ora maromaro. Taorian’ny fidinana ifotony nataon’ny tomponandraikitra, niravona ny olana.
Tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana : laharam-pahamehana ny lafiny sosialy
Ny lafiny sosialy no teboka iraisan’ireo solombavambahoaka fa tokony hatao laharam-pahamehana amin’ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana izay handalo tsy ho ela eny amin’ny solombavambahoaka. Tsy tokony ho adino ihany koa ny fahasalamana sy ny fandriam-pahalemana raha ny fanazavana.
Fidiovana mandritry ny fadimbolana : mbola misy ny sakana
Tsy ampy ny fampahafantarana ny fiatrehan’ny vehivavy ny fadimbolana eto Madagasikara. Mbola maro ny sakana mipetraka ho azy ireo. Marihana androany 28 Mai ny andro manerantany ho an’ny fidiovana mandritry ny fadim-bolana.
Sehatra tsy miankina : miandry vahaolana avy amin’ny fitondrana
Mangataka ny hahafahana mindram-bola amin’ny tahan’ny zana-bola ambany ireo sehatra tsy miankina na ny secteur privée. Teboka iray tao anatin’ny tolokevitra izay efa nolavin’ny fitondram-panjakana io, araky ny nambaran’ny Filohan’ny fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy androany. Amin’izao fotoana izao, andrasan’ny sehatra tsy miankina ny vahaolana aroson’ny fanjakana, hahafahana manohana azy ireo anatin’izao krizy ateraky ny Covid-19 izao.